Wararka Suuqa Suuqa | Dhaqaalaha Dhaqaalaha (Bogga 3)
Tusmooyinka ugu habboon ee suuqa saamiyada Isbaanishka
Suuqa Kala Iibsiga ee Barcelona, ​​oo qayb ka ah kooxda Bolsas y Mercados Españoles (BME), waxay ku dhaqaaqday inay dib u eegis ku sameyso isku-darka iyo miisaanka shirkadaha laga yaabee in maal-gashadayaal badan aysan ka warqabin xilligan, laakiin dammaanadaha qaybiya saamiyada shirkadaha saamileyda waxay kuxiran yihiin tusmooyinka astaamo kala duwan
Sidee loogu kabaa hawlgabka ugu yar ee hawlgabyada?
Celceliska hawlgabka ee Isbaanishka ayaa kordhay muddooyinkii ugu dambeeyay qiyaastii 6%. Ilaa laga gaarayo qaddar dhan 985,16 euro bishii, sida ku cad xogta Celceliska hawlgabka ee Isbaanishka ayaa koray muddooyinkii ugu dambeeyay qiyaastii 6%. Ilaa laga gaarayo qaddar dhan 985,16 euro bishii, sida ku cad xogta ay bixiso Wasaaradda Shaqada
Ma jiraa ama hoos u dhac dhaqaale ma ku jiraa dhaqaalaha adduunka?
Mid ka mid ah arrimaha ganaaxa ku haya suuqyada sinnaanta ayaa ah xaqiiqda ah in dhaqaalaha laga yaabo inuu ku jiro hoos u dhac Mid ka mid ah waxyaabaha sababa ciqaabta suuqyada sinnaanta ayaa ah xaqiiqda ah inay ku jirto hoos u dhac dhaqaale adduunka
Ibex 35 wuxuu ka hooseeyaa 9.000 dhibcood
Sidii la filayay, arrimuhu si hagaagsan ugama socdaan xisaabtanka xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35, qaybtan labaad ee sanadka. Sidii la filayay, arrimuhu si hagaagsan ugama socdaan xisaabtanka xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35, ee qaybtan labaad ee sanadka hadda socda
Heerarka dulsaarku ma kici doonaan ilaa qeybta hore ee 2020
Bangiga Dhexe ee Yurub (ECB) wuxuu go'aansaday maanta oo khamiis ah inuu ilaaliyo sicirka dulsaarka ilaa iyo qeybta hore ee sanadka 2020. Taasi waa, sicirka Bankiga Dhexe ee Yurub (ECB) wuxuu go'aansaday Khamiistaan ​​inuu ilaaliyo sicirka dulsaarka ilaa qeybta hore ee 2020
Doodaha maalgelinta maalgelinta dahabka
Farqiga udhaxeeya sahayda iyo dalabku aad ayuu u cidhiidhsanaa ilaa 1996. Xitaa 1996, 1997, 2000 iyo 2001, sahaydu kuma filnayn waana jirtay .Si kastaba xaalku ha ahaadee, dahabku waa mid ka mid ah waxyaabaha lagu beddeli karo ee laga magan galo dhacdooyinka xasillooni darrada ah. suuqyada sinnaanta
Maxaa la sameeyaa haddii Ibex 35 uu tago 8.500 dhibcood?
Waxaan ku jirnaa usbuuc muhiim u ah suuqyada saamiyada ee adduunka, laakiin gaar ahaan tan Isbaanishka, taas oo u horseedi karta hoos u dhac hoose oo ugu yaraan illaa iyo inta Ibex 35 uusan ka soo kabanin heerka dhibcaha 9.500 ee ah xariijinta hadda inta udhaxeysa kor u kaca iyo hoos u dhaca.
Faa'iidooyinka maalgashiga dhijitaalka ah
Mid ka mid ah gabagabada ay gaareen XNUMXst Popcoin Investment Barometer warbixinteedii ugu dambeysay ayaa ah in lix ka mid ah toban ilaaliyeyaasha Isbaanishka ah Marka ugu horeysa la xuso in saameynta ugu horreysa ee dhabta ah ee isticmaalka dijitaalka ama maalgashiga internetka ay tahay shaki la'aan inay gacan ka geysaneyso yareynta kharashyada
Maalgelinta ADIF bonds cagaaran
Maalgelinta curaarta cagaaran waxay noqon kartaa beddel aad u xiiso badan oo maalgashi waana mid ka mid ah wax soo saarka ugu caansan Maalgelinta bonds cagaaran waxay noqon kartaa beddel aad u xiiso badan oo maalgashi waana mid ka mid ah wax soo saarka ugu muhiimsan.
Siemens Gamesa: waa mid khatar ku ah shilalka suuqa saamiyada
Mid ka mid ah qiimaha inta badan ay raacaan maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah shaki la'aan waa Siemens Gamesa. Waa mid gaar ah, taas oo ay uga badan yihiin Mid ka mid ah qiimayaasha ay raacaan maalgashadayaasha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah shaki la'aan waa Siemens Gamesa iyo gaar ahaan, taas oo ay aad uga jecel yihiin fulinta hawlo badan oo mala awaal ah.
Atresmedia iyo Mediaset, oo leh saami dhan 10%
Shirkadaha warbaahinta badan ee isgaarsiinta qaranka, Atresmedia iyo Mediaset, ayaa ah kuwa hada qeybiya dakhliga ugu deeqsinimada badan Shirkadaha warbaahinta badan ee isgaarsiinta qaranka, Atresmedia iyo Mediaset, waa kuwa hada qeybiya faa iidada ugu sareeysa ee deeqsi ee isbaanishka
6 beddel xaga maalgashiga xagaagan
Xilliga kuleylaha maahan waqti wanaagsan oo maalgashi lagu sameeyo. Qaddarka qandaraasku si weyn ayuu hoos ugu dhacaa marka loo eego xilliyada kale ee sannadka. Xilliga xagaaga ma ahan waqti ku habboon maalgashiga, halkaasoo mugga qandaraasku uu si weyn hoos ugu dhaco marka loo eego xilliyada kale ee sannadka.
Maxaa lagu sameeyaa keydkeena xagaagan?
Xagaagu wuxuu yimaaddaa hal sano oo dheeri ah oo leh wakhti loogu talagalay nasasho iyo nasasho. Iyaga oo aan ahayn daqiiqad aad u faa'iido badan xagaaga - Xagaagu wuxuu yimaadaa hal sano oo dheeri ah iyo wakhti go'an oo loogu talagalay nasasho iyo nasasho. Ma ahan waqti aad ugu habboon maalgashiyada suuqyada sinnaanta.
Waxyaabaha maalgashiga iyo istaraatiijiyadaha
Mid ka mid ah badeecadaha ay suuqgeeyaan tiro badan oo damaanado iyo shirkadaha wax-kala-beddelashada ayaa ah xisaabaadka maaliyadeed ee loogu talagalay Mid ka mid ah alaabada ay suuqyada suuq-geynta iyo suuq-geynta saamiyadu ay yihiin xisaabaadka maaliyadeed ee loogu talagalay maal-gashadayaasha ugu horreeya isweydaarsiga lacagta isla markaana uma baahna xigasho waqtiga-dhabta ah
Qeybaha iyo qiyamka ayaa ka faa'iideystay oo waxyeello u geysteen dowladda cusub
Dowladda cusub ee Spain yeelan doonto bilaha soo socda waa inay u adeegtaa maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah si ay si fiican u jaangooyaan markii ay qorsheynayaan istaraatiijiyadooda Qeyb kale oo ka mid ah qeybaha ugu saameynta badan ma noqon karo wax aan ka aheyn koronto, mana ahan wax aan micno lahayn, waa in la xusuusnaadaa Shirkadaha noocan ah ayaa inta badan hormood ka ah goynta doorashooyinka kadib
6 fursadaha ganacsi ee suuqa saamiyada Isbaanishka
In kasta oo hubanti la'aan badani ay ka jirto suuqyada suuqyada Isbaanishka, waxaan shaki ku jirin in fursadaha ganacsigu weli ku sugan yihiin suuqyadan.Si kasta oo ay hubanti la'aan weyn ka jirto suuqyada sinnaanta ee Isbaanishka, waxaan shaki ku jirin in fursadaha ganacsigu ay weli taagan yihiin xilligan.
Sidee bay u saamaynaysaa in dulsaarku aanu kor u kicin?
Go'aanka Bankiga Dhexe ee Yurub (ECB) ee dib u dhigista kororka dulsaarka dulsaarka aagga euro wuxuu saameyn kale ku yeelanayaa go'aanka Bankiga Dhexe ee Yurub (ECB) ee dib u dhigista kororka dulsaarka aagga euro-da saameyn kala duwan oo kuxiran qaybta laga hadlayo
Veto-ga Google ee Huawei wuxuu burburayaa keydka tikniyoolajiyadda
Saameynta go'aanka ay qaadatay Google ee ah in ay jabiso xiriirkii ay la laheyd astaanta ganacsiga Shiinaha ee Huawei ayaa walaac weyn ku abuurtay saameynta go'aanka ay qaadatay Google ee ah in ay jabiso xiriirkeeda ay la leedahay ganacsiga Shiinaha ee Huawei ayaa walaac weyn ku abuuray yar iyo dhexdhexaad maalgashadayaasha
6 istiraatiijiyad maalgashi oo lagu horumariyo xagaagan
Xagaagan waxaa laga yaabaa inuu noqdo kii ugu dambeeyay ee dulsaarka hooseeya ee aagga euro-da, sida uu sheegayo Bangiga Dhexe ee Yurub (ECB). Dhamaan indhaha Sikastaba, xagaagan waxaad qaadan kartaa istiraatiijiyado maalgashi oo taxane ah oo laga yaabo inay u daneynayaan danahaaga shakhsi ahaaneed bilahaan gaarka ah
Waaxda dalxiiska: in lagu xisaabtamo xagaaga
Markii aan ku dhowaanayno bilaha xagaaga ee diiran, qiyamka waaxda dalxiisku waa soo jeedimo qaarkood oo la tixgelinayo Markaan ku dhowaanayno bilaha xagaaga ee diiran, qiimaha waaxda dalxiisku waa soo jeedino qaar ka mid ah xisaabta ku darso sameynta keyd faa'iido leh muddadan sanadka
Lacag dhigashada kuxiran Eurostoxx 50
Mid ka mid ah xeeladaha ay heli karaan maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe si ay uga dhigaan keydkooda faa'iido iyaga oo aan u maleyneynin khataraha ayaa ah isku xirka deebaajiga Mid ka mid ah xeeladaha ay heli karaan maalgashadayaasha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah si ay uga dhigaan keydkooda faa'iido iyaga oo aan u maleyneynin in halistoodu tahay in lagu xiro dhigaalka bangiga muddada-go'an iyo tusmada xulashada saamiyada Yurub, Eurostoxx 50
Ibex 35 Dividends iyo Ibex 35 Inverso: indices kale oo ku saabsan suuqa saamiyada
Ibex 35 Dividends iyo Ibex 35 Inverso waa qaar ka mid ah indices saamiyada ugu badan ee aan la garanayn halkaas oo maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ay maal gashan karaan.
Qeybta korantada waxay u shaqeysaa sidii gabbaad ay ugu dhacdo dhicitaanka suuqa saamiyada
Kaliya waaxda korantada ayaa wali ku habsatay hoos udhaca ku yimid hoos u dhaca tusmada xulashada xisaabaadka Isbaanishka, Ibex 35. Taasi waqti gaaban Kaliya waaxda korantada ayaa wali ku habsatay waxayna gabaad ka tahay hoos u dhaca ku yimid tusmada xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35 iyo in ka badan hal toddobaad ayaa ka soo baxay 9.500 ilaa 9.000 dhibcood
Alaabada ugufiican ee lagu maalgaliyo dakhli go'an oo isbadal badan
Xaqiiqdii mid ka mid ah rajooyinkaaga ugu dhakhsaha badan ee maalgashiga ayaa ah inaad iibsato saamiyada saamiyada. Laakiin waa inaad ogaataa inaadan ku qasbanayn.Hadda la joogo waxaad haysataa alaabooyin kale oo sinnaan ah oo kuu oggolaanaya inaad sameyso keyd faa'iido leh, in kasta oo inta badan xaaladaha moodooyinka maalgashiga ee aadka u dagaal badan.
Tilmaamaha ugu wanaagsan ee wax ku iibinta guuleysta ee suuqa saamiyada
Xaqiiqdii mid ka mid ah rajooyinkaaga ugu dhakhsaha badan ee maalgashiga ayaa ah inaad iibsato saamiyada saamiyada leh dammaanad gaar ah oo guul leh. Hagaag, sida xaqiiqada ah mid ka mid ah rajooyinkaaga ugu dhakhsaha badan ee maalgashiga ayaa ah inaad iibsato saamiyada saamiyada oo leh dammaanad gaar ah oo guul ah.
Tilmaamaha lagu yareynayo halista ku jirta ganacsiga Forex
Suuqa Forex, oo ah midka lacagaha lagu kala beddelo, wuxuu abuuraa fursado badan oo ganacsi, maadaama ay mid tahay ...
Xiddigaha cusub ee suuqyada soo baxaya
Suuqyada soo baxaya waa wadamadaas ama dhaqaalaha kujira marxalad kala guur ah oo udhaxeysa wadamada soo koraya iyo wadamada Suuqyada soo koraya waa wadamadaas ama dhaqaalaha kujira marxalada kala guurka ee wadamada soo koraya iyo wadamada horumaray.
Afarta shirkadood ee leh saamiga ugu fiican Ibex 35
Marka loo eego xogta ay bixisay Reuters, IAG, Endesa, Enagás iyo Repsol ayaa ah saamiyada ugu badan ee saami qaybsiga saamiyadan Sida ku cad xogta ay bixisay Reuters, IAG, Endesa, Enagás iyo Repsol waa saamiyada ugu faa'iidada badan saami qaybsiga. oo hadda lagu bixiyo jaantuska xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35
Ibex 35 inta udhaxeysa heerarka 9.200 iyo 9.600 dhibcood
Muddo dheer, tusmada xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35, ugama dhaqaaqin si dambe. Qeybta isdhaafka ee udhaxeysa Muddo dheer tusmada xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35, lama dhaqaajin dhinaca dambe. Qeybta udhaxeysa 9.200 iyo 9.600 dhibcood waa kuwa calaamadeeya jihada hal jiho ama mid kale
Vibex: Heerka isbeddelka ee suuqa saamiyada Isbaanishka
Xaqiiqdii waligaa kamaadan maqlin Vibex adduunka maalgashiga? Hagaag, waa tusmo bixin karta fikrada aan caadiga ahayn ee lagu furayo 'Vibex' maadaama aysan kudarsanayn damaanada ama shirkadaha liis garaysan waana qaab gaar ah cabirka cabsida sida VIX ee Maraykanka waana loo isticmaalaa in lagu ogaado gobolka dhabta ah ee suuqyada
Dagaalka ganacsiga ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ayaa sii xoogeysanaya
Isweydaarsiga saamiyada adduunka oo dhan wuxuu ku noolaa maalin adag natiijada wajiga cusub ee ay ...
Tusmooyinka suuqa saamiyada Isbaanishka: in la maalgaliyo lacagta
Saamiyada Isbaanishka kuma koobna kaliya Ibex 35, sida qaar ka mid ah maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe ay u maleyn karaan xilligan. Kuwa kale ayaa jira Waxaa jira tusmooyin kale oo aan aad loo aqoon oo u noqon kara ujeedada howlaheena hada wixii ka dambeeya, qaarna aad ayey u khuseeyaan, in kasta oo kuwa kale ay yihiin kuwo aan si weyn loo ogeyn qeyb badbaadayaasha ka mid ah.
Dakhli go'an ama dakhli isbeddela?
Xulashada udhaxeysa badeecooyinka ka soo gala dakhliga go'an ama saamiyada ayaa ka mid ah go'aamada ka soo baxa maalgashigaaga wejiga doorashada udhaxeysa badeecooyinka ka soo gala dakhliga joogtada ah ama sinnaanta ayaa ah mid ka mid ah go'aamada ku saabsan maalgashigooda semesterka labaad
Waxyaabaha kicin kara shilalka suuqa saamiyada
Shil ka dhacay suuqa saamiyada waa xaalad dhab ahaan ku qarsoon maanka maalayaasha maalgashadayaasha yar yar iyo kuwa dhexe. Lama iloobi karo in xaaladaha qaarkood, hoos u dhac ku yimid suuqa saamiyada ay tahay dhacdo dhab ahaantii ku qarsoon maskaxda maalayaal badan oo yar iyo kuwa dhexdhexaad ah.
Maalgashiga bonds waara ee dowladda Basque
BME, iyada oo loo marayo Bilbao Stock Exchange, waxay qiraysaa in berri laga ganacsado arrinta cusub ee curaarta waara ee ay bilawday dowladda Basque qaddarka BME, iyada oo loo marayo Bilbao Stock Exchange, waxay qiraysaa in berri laga ganacsado arrinta cusub ee curaarta waara ee ay soo bandhigtay Dowladda Basque lacag dhan 600 milyan oo yuuro
6 su’aal oo maalgashadayaashu isweydiin karaan
Maalgashadayaashu waxay inta badan isweydiin karaan su'aalo badan oo laga yaabo inaan laga jawaabin sababo badan awgood. Qodobkaan waxaan si joogta ah uweydiineynaa su'aalo badan oo maalgashadayaashu isweydiin karaan oo laga yaabo inaanu jawaab u helin sababo badan awgood iyo in qodobkaan aan ku milicsaneyno qaar ka mid ah walaacyada aan ka qabsan karno wax ka badan hal daqiiqad
Doorashooyinka guud ee Isbaanishka: Falcelinta suuqa
Ugu yaraan mid ka mid ah shakiga ay qabaan maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe ee Spain, midka la xiriira doorashooyinka guud ee dhacay Ugu yaraan mid ka mid ah shakiga ay lahaayeen maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe ee Spain, ayaa la cadeeyay, doorashooyinka guud. taasi waxay dhacday Axadii ina dhaaftay
Kaladuwanaanta: bangiyada vs koronto
Marar dhif ah ayay jirtay kala duwanaansho aad u saraysa oo udhaxeysa qiyamka qaybaha bangiyada iyo korantada. Meesha gebi ahaanba la geeyay Waxay ku jirtaa xilliyada ugu ballaaran ee dhaqaalaha halkaasoo qiyamka u dhigma bangiyada ay ku yeelan karaan waxqabad wanaagsan
Furayaasha wajihi kara maal gashiga kahor xagaaga
Xagaagu hubaal waa xilli adag oo suuqyada maaliyadeed loo siman yahay sababo kala duwan awgood oo aan hoos ku sharxi doonno. Xagaagu hubaal waa xilli adag oo suuqyada maaliyadeed ee sinnaanta sababo kala duwan awgood oo aan hoos ku sharxi doonno.
6 fure u ah hagaajinta maalgashiga
Mid ka mid ah ujeeddooyinka maalgashi kasta oo yar iyo mid dhexdhexaad ah waa inuu ahaadaa ilaalinta boosaska ay ka leeyihiin suuqyada sinnaanta ee kor ku xusan Mid ka mid ah ujeeddooyinka maalgashi kasta oo yar iyo dhexdhexaad waa inuu ahaado ilaalinta boosaskooda suuqyada sinnaanta sida mid ka mid ah furayaasha ku guuleysto
Qiimaha korantada: isbeddelka isbeddelka ama saxitaanka?
Kuwani maahan waqtiyo wanaagsan qiyamka waaxda korantada. Toddobaadyadii la soo dhaafay, halka suuqyada sinnaanta ay soo mareen qaar Waxaa jira qodob si weyn u dhaawacaya qiimaha korantada ma aha mid kale oo aan ka ahayn shakiga laga abuuray siyaasadda Isbaanishka natiijada doorashada
Qeybaha si looga fogaado suuqa saamiyada sanadkan
In kasta oo saamiyadu ay leeyihiin waxqabad aad u wanaagsan, haddana muhiimad gaar ah ma laha in sixitaannada la sameeyo rubuca labaad ee sanadka Haddii ay dhacdo qiimeyn xagga suuqyada saamiyada ah, waxaan shaki ku jirin inay jiraan qaybo laga yaabo inay waxqabadkoodu ka liito qiimaha intiisa kale
Sidee noqon doonaa maalgashiga 2019?
Waaxda Falanqaynta Dakhliga ee 4 Banco waxay soo bandhigtay Istaraatiijiyaddeeda Maalgashiga ee 2019, oo lagu calaamadeeyay "hoos u dhac ku yimid wareegga dhaqaalaha Ma ilaabi karno waqtigan inay tahay xaalad ka hor sicirka kororka aagga euro, waxay muhiim u noqon doontaa mustaqbalka nooc kasta oo maalgashi ah
Maalgelinta: maxaa la sameeyaa haddii suuqa saamigu hoos u dhaco?
Ku dhowaad in la dhammeeyo simistarka koowaad ee sannadka waa wakhti ku habboon in laga fiirsado waxa dhici doona haddii hadda laga bilaabo maalgashiga dakhliga Ku dhowaad dhamaadka semesterka koowaad ee sannadka waa wakhti ku habboon in laga fikiro waxa dhici kara haddii hadda laga bilaabo Waqtigaan la joogo, maalgashiga saamiyada waxaa ku dhacay dib u dhac aad u daran
Sidee doorashadu u saameyn doontaa suuqa saamiyada Isbaanishka?
28-ka, Isbaanishku waxay ballan la leeyihiin doorashooyinka. Laakiin maalgashadayaashu sidoo kale waxay aad u xiiseynayaan inay ogaadaan waxa ka soo baxa suuqyada.Qaybaha saamiyada qaarkood ayaa ka xasaasi badan kuwa kale marka laga hadlayo fulinta oo la abuuri karo ka dib horumarinta doorashooyinka guud ee bishan.
Maxaa lagu sameeyaa keydkeena markay tahay Ista?
Waxaa imanaya xilli sanadka ah, sida Easter, marka amniga keydku uu ka sarreeyo tixgelinta kale. Dareenkan, waxaa imanaya waqti sanadka ah, sida Easter, marka amniga keydku uu ka adkaado tixgelinta kale
ECB waxay go'aansatay inaysan faragelin inkasta oo gaabiska uu socdo
Wax walbaa weli waa isku mid siyaasadaha lacagta ee aagga euro, ka dib shirkii ugu dambeeyay ee uu fuliyay Bangiga Dhexe ee Yurub (ECB). Wareegga Wax walbaa waa isku mid siyaasadaha lacagta ee aagga euro, ka dib shirkii ugu dambeeyay ee uu fuliyay Bangiga Dhexe ee Yurub (ECB). Shirka jaraa'id, madaxweynahooda, Mario Draghi, wuxuu ka faalooday in shirkii golaha "uusan shaqeyn"
Banco Sabadell daqiiqad xasaasi ah: wuxuu ka hooseeyaa euro
Haddii ay jirto nabadgelyo ku qoran suuqa saamiyada oo ilaalinaysa farsamo aad u liidata, shaki la’aan waa Banco Sabadell. Hadday jirto ammaan ku qoran suuqa saamiyada oo ilaalinaysa farsamo aad u sii xumaatay, taasi shaki la’aan Banco Sabadell
4 kadis ah in saamiyada Isbaanishka ay na keeni karaan
Rubuca labaad ee sanadka wuxuu layaab kadhigi karaa layaabka layaabka leh ee Ibex 35 ee ay tahay inuu kadhigmo galka maalgashikeena. dhamaadka sanadka
6 xogta lagama maarmaanka u ah in lagu qabto jagooyinka suuqa saamiyada
Shaki kuma jiro in hawsha iibsiga saamiyada ee suuqyada sinnaanta ay u baahan tahay dadaal yar dhanka shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah Shaki kuma jiro in howsha iibsiga saamiyada ee suuqyada sinnaanta ay u baahan tahay dadaal yar qeyb ka mid ah iyo maalgashadayaasha dhexdhexaadka ah iyada oo loo marayo xog taxane ah
Amadeus: wuxuu xiriir dhow la leeyahay dalxiiska
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah istiraatiijiyadaha wax ku oolka ah ee maalgashiga lagu aasaasay qaybaha leh koritaanka ugu sareeya ee dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha Dhinaca kale, waxaan la ilaawin karin in Amadeus uu yahay mid ka mid ah dammaanadaha hantida Isbaanishka ee leh farsamada ugu fiican ee xilliyadan saxda ah.
5 suuqyada saamiyada caalamiga ah oo aad u xiiso badan maalgashi
Waqtigaan la joogo, tusmada xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35, durba waa ficil ahaan waa 9600 dhibcood. Marka loo eego, waxay umuuqataa inay jiraan tiro suuqyo ah saamiyada caalamiga ah oo faa iido badan u yeelan kara furitaanka boosaska hantidan maaliyadeed.
Dabeecadda: sida beddelka maalgashiga ee 2019
Naturgy waa mid ka mid ah damaanadaha sameeya sida ugu fiican tilmaamaha xulashada ee saamiyada Isbaanishka. Labadaba illaa iyo sanadkaan iyo Naturgy-ka waa mid kamid ah damaanadaha sameeya sida ugu fiican ee tilmaamaha xulashada ee saamiyada Isbaanishka, labadaba sanadkaan iyo sanadkii hore
Ma tahay waqti ku habboon in la galo Bankia?
Maalgashadayaashu waxay ka dooran karaan bangiyo kala duwan si ay uga dhigaan keydkooda faa'iido sannadkan adag suuqyada dakhliga ee Bankia ay heleen faa'iido lagu tilmaami karo oo ah 703 milyan oo yuuro 2018, taas oo ka dhigan koror 39,2% ah marka loo eego 2017
5 keydka Isbaanishka ah si looga hortago hoos u dhaca dhaqaalaha
Bangiga Dhexe ee Yurub (ECB) wuxuu dhowaan dib u habeyn ku sameeyay saadaashiisa dhaqaale ee wadamada Eurozone sanadaha soo socda. Halkee bay leedahay Istaraatiijiyaddan lagu wajahayo dib-u-dhaca dhaqaale ayaa la horumarin doonaa iyadoo taxaddar weyn laga muujinayo keydka la xushay
Maxaa la sameeyaa haddii aad qalad ku gashay suuqa saamiyada? Xalalka qaar
Mid ka mid ah dhibaatooyinka la xiriira hawlgal kasta oo sarrif ah ayaa ah inaad qalad sameyso markaad wax ku iibsaneyso qiimaha suuqa. Taasi waa, si aad u sixi kartid dhibaatooyinkan maalgashiga suuqyada sinnaanta, waxaan soo jeedin doonnaa xalal taxane ah si aan isugu dayno yareynta xaaladdan ku imaan karta mowjadaha qaarkood ee hawlgalladaada suuqa saamiyada.
Alaabooyinka lagu maalgelinayo sinnaanta
Suuqa saamiyada Isbaanishka waxaa laga iibsaday 41.407 milyan oo euro bishii Janaayo, 6,8% in ka badan bishii hore iyo bishii ugu fiicneyd tan iyo Oktoobar, in kasta oo 18,6% ka yar tahay Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu habboon waa mustaqbalka mustaqbalka tusmooyinka suuqa saamiyada taasna waxay u taagan tahay qaab kale fahamka maalgashiga suuqyada sinnaanta
Ibex 35 Dividends, oo ah tusmo yar oo laga yaqaan Spain
Shaki kuma jiro in Spain ay jiraan ilo kale oo tixraac ah oo ka baxsan tusmada xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35. Gaar ahaan, Ibex 35 Dividends waa tilmaame aad u faa'iido u leh maalgashadayaasha kuwaas oo ku daraya kala duwanaanta qiimaha qiimayaasha
Raadinta qiimaha suuqa saamiyada
Maalgashadayaashu waxay ka dooran karaan kanaallo badan oo macluumaad ah si ay u ogaadaan heerka ay hadda marayaan maalgashigooda. Had iyo jeer ku saleysan Maalgashadayaasha waxay ka dooran karaan kanaallo badan oo macluumaad si ay si sax ah ula socdaan qiimaha suuqa saamiyada
Sidee loowareegaa jagooyinka faylalka maalgashiga?
Mid ka mid ah furayaasha ugu waxtarka badan ee lagu wanaajinayo maalgashiga ayaa ku nool xaqiiqda sameynta isku beddel sax ah oo ku saabsan qiimayaasha ay ka kooban yihiin maalgashigeennu Mid ka mid ah furayaasha lagu hagaajinayo maalgashiga ayaa ku nool sameynta isku beddel sax ah oo ku saabsan qiyamka galka maalgashiga
6 Ammaanada Ka Ganacsada Lacagta Ka Hooseysa Euro ee Aad U Khatarta Badan
Marka ugu horeysa, waa inaad ka taxaddartaa saamiyada ka ganacsanaya wax ka hooseeya hal euro. Sababaha kale awgood maxaa yeelay marka la gaaro Marka hore, qofku waa inuu ka digtoonaadaa qiimaha saamiyada ee ka ganacsada wax ka hooseeya hal cutub oo euro ah, iyo sababaha kale maxaa yeelay mar haddii xaaladdan la gaaro, waa wax aad u adag in si caam ah loo soo bandhigo.
Sidee wax looga iibsadaa bacda?
Si sax ah u soo galka suuqyada waa mid ka mid ah ujeeddooyinka maalgashi kasta tanna waa inaad qorsheyso istiraatiijiyad aad u wanaagsan oo la qorsheeyay. Ku soo gelitaanka suuqyada si sax ah wax iibsigu waa mid ka mid ah ujeeddooyinka maalgashade kasta tanna waa inaad qorsheysaa istiraatiijiyad aad u wanaagsan oo qorsheysan.
Soo baxaya: qaybta internetka ee suuqa saamiyada
Internetka Yurub waa tusmada aruurineysa oraahda shirkadaha ugu muhiimsan waaxdan tikniyoolajiyadeed ee qaaraddii hore iyo, taas oo ah Internetka Yurub, waa tusmada ururinaysa oraahyada shirkadaha ugu muhiimsan waaxdan tikniyoolajiyadeed ee hore. qaaradda iyo, oo ay ka mid yihiin shirkadaha isku dhafan ilaa kuwa kale ee geeddi-socodka ballaarinta
Calaamadaha muujin doona hoos u dhaca suuqa saamiyada
Mid ka mid ah cabsida ay qabaan maal-gashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah xilligan ayaa ah in suuqyada sinnaanta ay galaan meel cad Mid ka mid ah cabsida ay qabaan maal-gashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah xilligan ayaa ah in suuqyada sinnaanta ay galaan hoos u dhac cad
Maxay yihiin badeecooyinka habaysan?
Maalgalinta maal gashigu waa mid ka mid ah aaladaha door bidaya maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe. Laakiin qaabkeeda wax soo saarka qaabaysan, ugu dambeyntii waa istiraatiijiyad wax ku ool ah oo looga hortago waxqabadka daciifka ah ee ay bixiyaan wax soo saarka bangiyada xilligan.
Qeybaha suuqa saamiyada Isbaanishka
Kahor intaadan furin jagooyinka suuqyada sinnaanta waxay noqon doontaa gabi ahaanba lama huraan inaad si cad uga muuqato qaybaha ay aadayaan Kahor intaadan furin boosaska suuqyada sinnaanta waxay noqon doontaa gabi ahaanba lama huraan inaad ka tahay cadeyn qaybaha ay ku wajahan yihiin keydinta
Ibex 35 wuxuu kudhowaad yahay 9600 dhibcood, hada waa maxay?
Waxay umuuqatay wax aan macquul aheyn bilo yar kahor iyo gaar ahaan dhamaadka sanadka 2019. Laakiin runtu waxay tahay in tusmada sinaanta xulashada Waxay umuuqatay wax aan macquul aheyn kaliya dhowr bilood kahor iyo gaar ahaan dhamaadka 2019. Laakiin runtu waxay tahay in tusmada xulashada ee saamiyada Isbaanishka, ee loo yaqaan 'Ibex 35', hadda wuxuu ficil ahaan u joogaa 9600 dhibcood
Waxaan luminayaa lacag: maxaan sameyn karaa?
Marka si wixii kugu dhacay sanadkii la soo dhaafay aysan mar dambe u dhicin, waxaan ku siin doonnaa xoogaa tilmaamo habdhaqan ah si aad u ogaato waxa ay tahay inaad sameyso Dhibaatada ugu weyn ee lacag la'aanta ka jirta suuqyada sinnaanta ayaa ah in waxyaabaha ay ka sii dari karaan waxaadna leedahay khasaaro hawlgaladaada suuqa saamiyada
Doorashooyinka Yurub waxay saameyn ku yeelan doonaan suuqa saamiyada
Doorashooyinka baarlamaanka Yurub 2019 waxaa loo qorsheeyay inay ka dhacaan dhamaan wadamada midowga yurub maalinta Axada, 26-ka May, 2019. Maalinta xigta doorashada bisha yurub ee dhici doonta, suuqyada sinnaanta qaaraddii hore waxay bixin doonaan xukunkooda, iyadoo kuxiran natiijooyinka
Iska yaree qiimeynta shirkadaha birta ah
Bangiga maalgashiga Mareykanka ee JP Morgan ayaa dhowaan jaray qiimihii shirkadaha biraha Yurub ee ArcelorMittal, Acerinox Bangiga maalgashiga Mareykanka ee JP Morgan ayaa dhowaan jaray qiimihii shirkadaha biraha Yurub.
Cellnex waxaa lagu ciqaabi karaa suuqa saamiyada ee ERE
Cellnex shaki la'aan waxay ahayd mid kamid ah layaabka wanaagsan ee wanaagsan ee sinnaanta bilihii lasoo dhaafay. Tan iyo markii ay bilaabatay in lagu qoro Cellnex, shaki kuma jiro inay ahayd mid ka mid ah layaabka wanaagsan ee xagga sinnaanta bilihii la soo dhaafay.
Maxay yihiin khataraha ka imanaya goobaha ganacsiga?
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee caalamiga ah ee maalgashiga aanu keenin ayaa ah muuqaalka xaddidan mareegtada maaliyadeed ee dhijitaalka ah ee aanan garanaynin Goobaha ganacsiga dijitaalka ah waxa hubaal ah inaadan helin waa badeecadihii aad qandaraaska kula qaadan jirtay bangigaaga weligiis.
Deebaajiga si ay u maalgashadaan suuqa saamiyada
Mid ka mid ah istiraatiijiyadaha lagu maalgelinayo suuqa saamiyada iyada oo aan la soo bandhigin ayaa lagu soo rogay iyada oo loo marayo kaydinta bangiga ee muddada-go'an ee ku xiran suuqyada
Shirkadaha korantada iyo amniga bangiyada
Go'aanka Bankiga Dhexe ee Yurub (ECB) ee dib udhaca kororka dulsaarka dulsaarka aagga euro-da ayaa iftiimiyay kaladuwanaanshaha kala duwanaanshaha qiimaha dammaanadaha waaxda bangiyada iyo shirkadaha korontada
Isboortiga isboortiga oo ah maalgashi
Isbeddellada hadda ka socda suuqyada maaliyadeed, dakhli go'an iyo mid is bedbeddelaya, ayaa horseed u ah maal-gashadayaal yar yar iyo kuwa dhexdhexaad ah Waxaa jira kala duwanaansho fara badan oo u dhexeeya sharadka isboortiga iyo maal-gashiga macnaha dhabta ah ee ereyga tanina waa arrin ay tahay inaad qiimeyso
Deynta guud ee Spain
Mid ka mid ah cabsida ay qabaan maal-gashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah xilligan ayaa ah in deynta dadweynaha ay aad u sarreyso ayna culeys saari karto isbeddelka Mid ka mid ah cabsida ay qabaan maal-gashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah xilligan ayaa ah in deynta guud ay aad u sarreyso culeys saari kara isbeddelka suuqyada
Doorashooyinka Spain wax saameyn ah kuma yeelan suuqa saamiyada
Ku dhawaaqida qabashada doorashooyinka guud bisha Abriil 28 ma saameynayso sinnaanta. Tani waa qodob saameyn ku leh doorashooyinka soo socda waa wax aan waxba tarayn, ugu yaraan xilligan iyo kharashka waxa dhici kara toddobaadyada ka horreeya dabaaldeggeeda.
Ibex wuxuu dhaafey 9.300 oo dhibcood: waa kuwee qeybaha la galayo?
Ugu dambeyntiina, tusmada xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35, ayaa hoos u dhigtay taageerada farsamo ee xooggan ee ay dhowr bilood haysatay Ugu dambayn, tusmada xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35, ayaa hoos u dhigtay taageerada farsamo ee xoogga badan Waxaan haystay dhowr bilood 9.300 dhibcood
Telefónica waxay ku noqotaa iibsiga jagooyinka
Telefoonka qaranka ee Telefónica waa qiimaha hada jiidaya tusmada xulashada ee sinnaanta qaranka, Ibex 35, kadib markii inbadan Telecom telefónica qaranku waa qiimaha hada jiidaya tusmada xulashada ee sinaanta qaranka, Ibex 35, bilo badan kadib hubin la'aan ama xitaa khasaaro laxaad leh ku leh qiimaheeda
Dib-u-soo-celinta saamiyadu waa istiraatiijiyad ay shirkadaha ku taxan suuqyada sinnaanta ay ku fuliyaan xoogaa jeer. Waa la arkay Dib u iibsiga saamiyadu waa istiraatiijiyad ay shirkadaha ku taxan suuqyada sinnaanta ay ku fuliyaan inta jeer
Aragtida guud ee dhinaca falanqeeyayaasha maaliyadeed ayaa ah in kobaca dhaqaalaha uu sii socon doono sanadkan, in kastoo xoogaa kayar kan Mid ka mid ah fursadaha ugu wanaagsan ee maalgashi ee sannadkan hadda lagu jiro, fikradda qayb weyn oo ka mid ah falanqeeyayaasha dhaqaalaha, waxay ku tiirsan tahay bartamaha shirkadaha -cap
Taageerada iyo iska caabinta ku jirta Ibex 35
Ma jiro mid ka mid ah wakiillada maaliyadeed oo ka shakisan in tusmada xulashada ee dakhliga isbeddelka, Ibex 35, ay ku jirto isbeddel muuqda oo dhinaca dambe ah. Ma jiro mid ka mid ah wakiilada maaliyaddu shaki kuma jiro in tusmada xulashada dakhliga isbeddelka, Ibex 35, ay ku jirto isbeddel muuqda oo dhinaca dambe ah
Ma la joogaa waqtigii la maalgashan lahaa suuqyada soo koraya?
Labada sinnaan ee Yurub iyo Mareykanka waxay ku dhow yihiin inay gaaraan heerarkooda ugu sarreeya qiimaha dammaanadda. Calaamadaha qaarkood Xal wanaagsan oo lagu sameeyo keyd faa'iido leh laga bilaabo hadda waxaa matalaya suuqyada sinnaanta ee waddamada soo koraya qaarkood
Sidee loo dammaanad qaadayaa soo celin ka badan 3% keydka?
Shaki kuma jiro in bayaanka cinwaankani uu yahay mid ka mid ah ujeeddooyinka qayb wanaagsan oo ka mid ah maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe. Waqti, marka Mid ka mid ah ujeeddooyinka qayb ka mid wanaagsan ee maal-gashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, waqti, marka badeecooyinka kala duwan ee dakhliga go'an ay si dirqi ah uga bataan 1% soo-celinta ay ku bixiyaan keydka.
Furayaasha si sax ah u doorta qiime
Xulashada suuqa saamiyada waxay kuxirantahay kiisaska badankood istiraatiijiyad ay tahay in la qeexo kahor furitaanka boosaska suuqyada.Waxaa jira furayaal taxane ah oo maalgashi ah oo ka caawin kara dadka isticmaala inay si sax ah ugu sii gudbiyaan howlahooda suuqyada.
Madaxyada iyo dabo u dhexeeya dhismayaasha suuqa saamiyada Isbaanishka
Shirkadaha dhismaha ee ugu muhiimsan Spain, waana qeyb ka mid ah xulashada xulashada xisaabaadka Isbaanishka, Ibex 35, ayaa isdiiwaangaliyay inta lagu gudajiray Shirkadaha dhismaha ee ugu muhiimsan Spain, waana qeyb kamid ah xulashada xulashada xisaabaadka Isbaanishka, Ibex 35 , waxay diiwaangeliyeen koror ku yimid qiimahooda suuq lixdii bilood ee la soo dhaafay
Borja Prado ayaa ka baxday Endesa waxayna furtay shaki cusub shirkadda
Mid ka mid ah wararka soo jiitay maalmihii ugu dambeeyay ayaa ah iscasilaada hogaamiyihii ugu sareeyay ee Endesa kadib in ka badan toban sano oo uu xilka hayay. Mid ka mid ah wararka soo jiitay maalmihii la soo dhaafay waxaa ka mid ah iscasilaadda hoggaamiyihii ugu sarreeyay ee Endesa ka dib in ka badan toban sano oo uu xilka hayay
Tusmooyinka saamiyada ee Yurub
Haddii ujeeddada maalgashadayaashu ay tahay inay doortaan suuqyada sinnaanta Yurub, shaki kuma jiro in beddelaadaha ay ballaaran yihiin. Tusmooyinka saamiyada Yurub waa bedelka maalgashiga iyadoon laga tegin xuduudaha qaaraddii hore
Bonds waddani: nooc kale oo maalgashi
Mid ka mid ah wax soo saarka ugu yar ee aan la aqoon ee maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ahi waa shaki la'aan waxa loogu yeero dammaanadaha waddaninimo. Marka Mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee aan la aqoon ee maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ahi shaki la'aan waa waxa loogu yeero dammaanadaha waddaniyeed
Korontoleyda ayaa saxaya kororkoodii hore
Shaki kuma jiro in shirkadaha korontadu ay ahaayeen halyeeyada ugu muhiimsan ee saamiyada Isbaanishka sanadkii la soo dhaafay. Meeshan qaybtan Shaki kuma jiro in shirkadaha korontadu ay ahaayeen halyeeyada ugu muhiimsan ee saamiyada Isbaanishka sanadkii la soo dhaafay
Taageerada iyo iska caabinta si loo furo jagooyinka suuqa saamiyada
Mid ka mid ah dhinacyada ugu casrisan in la furo ama la xiro jagooyinka suuqyada sinnaanta waxaa lagu sameeyaa taageero iyo iska caabin. Mid ka mid ah dhinacyada ugu casrisan in la furo ama la xiro jagooyinka suuqyada sinnaanta ayaa lagu sameeyay taageerooyinka
Nidaamyada dijitaalka ah ee maaliyadeed: maxay yihiin iyo sidee u shaqeeyaan?
Sanadihii la soo dhaafay, aaladaha maaliyadeed ee dhijitaalka ah waxay noqdeen kuwo moodada ah kanaallo lagu horumariyo maalgashiga Laakiin maahan wax ku saabsan Sannadihii la soo dhaafay, barnaamijyada maaliyadeed ee dhijitaalka ah waxay noqdeen kuwo mooddo ahaan ah kanaallo lagu horumariyo maalgashiga
Shan fure oo laga soo saaray mugga qandaraaska
Suuqa saamiyada Isbaanishka waxaa la kala iibsaday 41.407 milyan oo euro bishii Janaayo, taas oo ka dhigan 6,8% in ka badan bishii hore iyo bishii ugu fiicneyd tan iyo Oktoobar, in kasta oo Sababtoo ah haddii mugga ganacsigu aad u yar yahay macnaheedu waa in qaddarinta ama qiimeynta qiimayaasha aad ayey u liitaan aasaasidooda
Isbeddelka maalgashadayaasha: sidee ayay halista u galaan?
Dhammaan maal-gashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ahi iskuma halistaan ​​isku si. Tan waxaa lagu muujiyay daraasad dhowaan la yiraahdo Warbixin ku saabsan isbeddelka ficilada falalka maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, lahjadda waxaa lagu dhejinayaa xaqiiqda ah in kooxdii ugu horreysay
Ibex 35 ee geeddi-socodka laterality: maxaa la sameeyaa?
Shaki kuma jiro in tusmada xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35, ay ku jirto isbeddel dhinaca dambe ah oo ay ku adag tahay inay ka baxaan. Shaki kuma jiro in tusmada xulashada ee saamiyada Isbaanishka, Ibex 35, ay tahay ee dhinaca dambe oo ay ku adag tahay inay ka baxaan bilihii la soo dhaafay
Waa maxay mugga qorista?
Mid ka mid ah sababaha inta badan saameeya qiimaha sinnaanta ayaa ah mugga qandaraasyada. Ilaa heer ay tahay mid ka mid ah waxyaabaha sababa inta badan saameynta qiimaha damaanadaha waa mugga ganacsiga ee dammaanadaha.
Maxay yihiin suuqyada USDC?
Mid ka mid ah soo-jeedimaha cusub ee dhigaya in keydku noqdo mid faa iido leh ayaa lagu arkaa iyada oo loo marayo wax soo saar noocan oo kale ah isla markaasna aan la aqoon qayb ahaan.
Shan qaybood oo wajihi doona suuqa saamiyada sanadka 2019
Mid ka mid ah furayaasha ka dhigaya ka-faa'iideysiga maalgashiga sannadkan waa in la abuuro xulasho wanaagsan qaybta amniga. Midkan furayaasha ah in maalgashiga laga dhigo mid faa iido leh sanadkan ayaa ah in la abuuro xulasho wanaagsan qeybaha sinaanta
Maalinta ayaa ka sareysa 60%
Haddii ay jirto sanduuq layaab leh oo ka jira saamiyada Isbaanishka oo aan ahayn cid ka mid ah shirkadda wax qaybisa ee Día.Maalmahan waxay samaynaysaa warka sababtoo ah waxay leedahay Haddii ay jirto sanduuq layaab leh oo ka jira saamiyada Isbaanishka oo aan ahayn cid ka mid ah shirkadda wax qaybisa ee Día
Nidaaminta waaxda ayaa ciqaabaysa shirkadaha korontada ku leh suuqa saamiyada
Mid ka mid ah qaybaha suuqa saamiyada ee laga yaabo inay la kulmaan waxqabadka ugu xun ee layligan aan hadda bilownay waa midka korontada. Meesha Mid ka mid ah qaybaha suuqa saamiyada ee laga yaabo inay la kulmaan waxqabadka ugu xun ee layligan aan hadda bilownay waa korontada
Qeybtii hore ee sanadka ayaa ku adkaatay suuqa saamiyada
Inyar oo maalgashadayaashu waxay u maleyn karaan in qeybtii hore ee sanadka ay ku sii xumaan doonaan suuqyada caalamiga ah ee sinnaanta. Laakiin runtu waxay tahay in maalgashadayaal yar ay u maleyn karaan in qeybta hore ee sanadka ay ku xoogeysan doonaan suuqyada caalamiga ah ee sinaanta
ECB ayaa dejin doonta xawaaraha suuqyada saamiyada Yurub ee 2019
Golaha maamulka ee Bangiga Dhexe ee Yurub (ECB) wuxuu go'aansaday in sicirka dulsaarka aan waxba laga beddelin kulammadii ugu dambeeyay. Hay'adda Golaha Maamulka ee Bangiga Dhexe ee Yurub (ECB) wuxuu go'aansaday inuu ilaaliyo sicirka dulsaarka kulamadiisa ugu dambeeyay.
Bacda afar beddel
Waxay noqon kartaa xilliga ugu dambeeya ee la beddelayo badeecada maaliyadeed si aan uga dhigno keydkeenna mid faa'iido leh. Sababo kala duwan awgood qaarkood ayaa soo muuqan kara Waxay noqon kartaa waqtiga ugu dambeeya ee la beddelayo badeecada maaliyadeed si kaydkeennu u noqdo mid faa'iido leh oo loo raadiyo waxyaabo kale oo beddelaad ah
Ammaanada kor u kaca
Mid ka mid ah furayaasha lagu sameeyo maalgashi wanaagsan ayaa lagu arkaa iyada oo la iibsanayo dammaanadaha saamiyada ee ku jira xaalad isbeddel ah Mid ka mid ah furayaasha lagu sameeyo maalgashi wanaagsan ayaa lagu arkaa iyada oo la iibsanayo dammaanadaha saamiyada ee ku jira xaalad isbeddel ah.
Ammaanada cusub ee suuqa saamiyada Isbaanishka
Waxaa laga yaabaa in maalgashadayaal badani aysan ogeyn in damaanadaha qaarkood ay ka muuqanayaan suuqyada sinnaanta si markaa loo shaqaaleeyo. Waxay ku saabsan tahay Laga yaabee maal-galiyayaal badan oo aan ogayn in dammaanadaha qaarkood ay ka muuqanayaan suuqyada sinnaanta si markaa loo shaqaaleeyo
6-da kayd ee ugu khatarsan suuqa saamiyada Isbaanishka
Markaan eegno sanadkaan aan hada bilownay, fikirka loo dhanyahay ee falanqeeyayaasha maaliyadeed ee kaladuwan ay bilaabayaan ayaa ah in maalgashadayaashu ay ka badnaadaan Si loo sameeyo gundhigooda dammaanadaha, waa inay ka fogaadaan soo jeedimaha suuqa saamiyada ee hantida maaliyadeed ee ugu halista badan.
Ibex 35 kahor caqabada 9800 dhibcood
Bisha Janaayo waxay ahayd mid aad u wanaagsan marka loo eego tilmaamaha xulashada ee sinnaanta qaranka, Ibex 35, oo dib u bilawday marinka cagajuglaynta ugu yaraan muddo gaaban. Bisha Janaayo waxay ahayd mid aad ugu wanaagsan kala-soocyada xulashada ee sinnaanta qaranka, Ibex 35, oo dib u bilaabay kanaalka bullaugga ugu yaraan muddada gaaban
Endesa waxay yareyn doontaa macaashkeeda laga bilaabo 2021
Maalgashadayaasha kujira suuqa saamiyada waxay kuheli doonaan dareen aan fiicneyn wararka sheegaya in shirkada korontada ee Endesa ay yareyneyso Endesa ay yareyneyso macaashka ay heleyso laga bilaabo 2021, tanina waa istiraatiijiyad lagu fekerayo Qorshaha Istiraatiijiga ah
Tag macaashka, haa ama maya?
Saami-qeybsiga suuqa saamigu waa qayb ka mid ah faa'iidada shirkadda ay go'aansato inay u qaybiso dhammaan saamileyda shirkadda. Waa dakhli go'an Dakhliga saamiyada ee suuqa saamigu waa qayb ka mid ah faa'iidada shirkadda ee ay go'aansato inay u qaybiso dhammaan saamileyda shirkadda
Santander, wadada 5 euro?
Mid ka mid ah qiimayaasha waaweyn ee sinnaanta qaran sida Banco Santander waxay ku taal isgoys isku mid ah sicirka qiimaheeda. Ma jiro Mid ka mid ah qiimayaasha waaweyn ee sinnaanta qaran sida Banco Santander oo ku taagan isgoysyada qiimaheeda
6 alaab khatar ah si looga fogaado 2019
Haddii aad tahay astaan ​​muxaafid ah, way ka fiicnaan doontaa 2019 haddii aad u jihayso maal gashigaaga hantida maaliyadeed ee ka badbaado badan kuwa ku jira suuqyada. Mid ka mid ah sababaha ugu habboon ee lagu sharxi karo isbeddelkan jihaynta suuqyada sinnaanta ayaa sabab u ah halista dhabta ah ee dhaqaale xumo cusub
Técnicas Reunidas: dib u soo kabasho ama isbeddel isbeddel ah?
Waa fikrad guud oo ku saabsan qayb weyn oo ka mid ah falanqeeyayaasha maaliyadeed in ay jiraan sababo ku filan oo loogu talagalay tusaha dakhliga xulashada Técnicas Reunidas ayaa bartilmaameedsanaya maalin kasta kor u kaca 3% usbuucii hore, ka dib markii ay hagaajisay qiimaheeda
Sidee ayaa sharciga isbeddelka cimilada loogu taxay suuqa saamiyada?
Mid ka mid ah tallaabooyinka lagu fekerayo iyadoo loo marayo sharciga isbeddelka cimilada ayaa ah mamnuucidda iibinta naaftada, shidaalka iyo iskudhafyada mid ka mid ah tallaabooyinka looga fikirayo sharciga isbeddelka cimilada ayaa ah mamnuucidda iibinta naaftada, shidaalka iyo isugeynta gawaarida
Suuqa Yurub iyo Bonds-ka Waxsoosaarka Sare ee 2019
Si aad u abuurto faylal maalgashi aamin ah oo dheellitiran sannadkan hadda socda, waa inaad ka xulasho badan tahay tan hadda. Suuqyada bonds dhalidda sare waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad ee wajihi doona sannadkan murugsan midna laga yaabo inuu leeyahay rajo wanaagsan
Istaraatijiyadaha maalgashiga si aad nolol ugu hesho 2019
Ma ahan wax qarsoodi ah in sanadkan 2019 uu noqon doono mid aad u adag dhammaan suuqyada maaliyadeed, labadaba sinnaanta iyo dakhliga go'an. Sidan ayaa loo muujiyaa Maaha wax qarsoodi ah in sanadkan 2019 uu noqon doono mid aad u adag dhammaan suuqyada maaliyadeed, sinaan iyo dakhli go'an labadaba
Miyaan arki doonnaa Telefónica sanadkan oo ka sarreeya 10 euro?
Haddii ay jirto qiime taasi waa xudunta doorbidyada dhinaca maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, taasi shaki la'aan waa teleco Telefónica. Haddii ay jirto qiime taasi waa xudunta doorbidyada dhinaca maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, taasi shaki la’aan waa telecoonka Telefónica
Fed wuxuu dejiyaa koorsada suuqyada saamiyada
Isbeddelka suuqyada caalamiga ah ee sinnaanta waxaa lagu calaamadeeyay bayaannada hoggaamiyaha sare ee Kaydka Federaalka ee mustaqbalka Mustaqbalka suuqyada sinnaanta caalamiga waxaa lagu calaamadeeyay bayaannada hoggaamiyaha sare ee FED ee ku saabsan sida ay noqon doonto isbeddelka noocyada
Sawirada jaantusyada: sida looga ganacsado suuqa saamiyada?
Mid ka mid ah istiraatiijiyadaha looga shaqeynayo suuqyada sinnaanta ayaa lagu soo saaray iyada oo loo marayo tirooyinka loogu yeero shaxanka. Waxay ku siin karaan xoogaa mid ka mid ah istaraatiijiyadaha looga shaqeynayo suuqyada sinnaanta ayaa lagu soo saaray iyada oo loo marayo tirooyinka loogu yeero shaxanka
Sidee wax looga qabtaa wajiga argagaxa suuqa saamiyada?
Xaaladda suuqyada saamiyada caalamiga ayaa ka khatar badan danaha maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe. Halka isbeddelku yahay mid ka mid ah xaaladaha ugu xun ee ka dhici kara suuqa saamiyada: argagaxa suuqa saamiyada oo taasi burburin karta maalgashiga
Qiimayaal cusub iyo hoos u dhac ku yimid Suuqa Sarrifka ee Madrid
Sida sanad walba oo cusub oo bilaabmaya, waxay xambaarsantahay warar taxane ah oo ku saabsan tusmooyinka suuqyada saamiyada waaweyn ee saamiyada Isbaanishka. In Sannadkan hadda, saamiyada Isbaanishku waxay ka koobnaan doonaan wadar ahaan 127 dammaanad oo ku yaal Suuqa Kala iibsiga ee Madrid
Maxay yihiin qiyamka difaaca ee lagu maalgashan karo suuqa saamiyada?
Dhammaan calaamadaha koorsada suuqa saamiyada cusub ee 2019 xaqiiqdii maahan kuwo aad u dhiirrigelinaya oo tilmaamaya ugu yaraan in isbeddelku ku jiri doono Mid ka mid ah tallaabooyinka ay tahay in dhammaan maal-gashadayaashu ay soo dejiyaan si ay u tixgeliyaan dammaanadaha lagu tilmaamay inay yihiin difaac ama muxaafid
Shan qaybood oo kayd ah oo si fiican uga fiicnaan kara 2019
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in sanadkaan uusan noqon doonin mid aad ugufiican suuqyada sinaanta, gaar ahaan qaybaha saamiyada qaarkood oo muujinaya isbedel Waxkasta waxay umuuqdaan inay tilmaamayaan in sanadkaan uusan aad ugufiicnaan doonin suuqyada sinaanta, gaar ahaan suuqyada saamiyada qaarkood.
6 qodob oo go'aamin doona suuqa saamiyada sanadka 2019
Xamaasad cusub oo wajaheysa sanadka cusub ayaa ah mid ka mid ah himilooyinka ay dadka yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah filayaan inay helaan 2019, in kastoo ay ku xirnaan doonto arrimo badan. Sannadkan waxaa jiri doona arrimo qaar oo go'aamin kara jihada ay suuqyada sinnaanta u qaadan karto hadda
7da hadiyadood ee ugu fiican ee ay Magi u keeni karaan maalgashadayaasha
Hal sano oo dheeri ah SSMM-kooda sadexda caqli leh ayaa sidoo kale booqan doona maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe 6-da Janaayo. Sannadkan, in ka badan sidii hore, dalabyadoodu way sii badnaan doonaan, Hal sano oo dheeri ah, Majaajiliistaha Saddexda ah ee Caqliga leh ayaa sidoo kale booqan doona maal-gashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah oo hadiyado la siin doona 6-da Janaayo
Tusmada Japan ee 'Nikkei Index' ayaa jabinaysa dhammaan taageerada
Suuqa saamiyada ee Japan ayaa calaamad cad u diray maalgashadayaasha reer Galbeedka habeenkii Kirismaska, runtiina rajo kama qabin. Iyada oo mid ka mid ah suuqyada saamiyada ee Japan ay farriin cad u dirtay maalgashadayaasha reer galbeedka habeenkii Kirismaska ​​iyo dabcan rajo kama qabin haba yaraatee
Marka la soo xigto sicirka hadda jira, waa wax iska caadi ah maalgashadayaasha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah inay isweydiiyaan haddii aan la gaarin waqtigii la geli lahaa suuqyada dakhliga Burburinta calaamadaha saamiga weyn ayaa run noqday maalmihii ugu dambeeyay ee sanadka cadaadiska iibkuna wuxuu leeyahay ahaa cashuur
Sidee saamiyada dulsaarku u saameeyaan?
Kaydka Federaalka ee Mareykanka (Fed) wuxuu kordhiyay sicirka dulsaarka rubuc dhibic ah inta udhaxeysa 2,25% iyo 2,5%, taas oo xaqiijinaysa muhiimadda falcelintan ka timid suuqyada maaliyadeed. Waxay leeyihiin dulsaarka suuqyada saamiyada adduunka oo dhan
Xagee lagu maalgeliyaa buurnida kirismaska?
Toddobaadkan dhammaadkiisa, Tartan-dhaqameedka Kirismaska ​​ayaa loo qaybin doonaa wadar ahaan 2.380 milyan oo yuuro, oo kuwa guuleysta oo keliya ay bixin doonaan Haddii aad ka mid tahay guuleystayaasha Gordo-ga Christmas-ka ee muddada dheer la sugayay waxaad jeebka ku ridan doontaa wadar ahaan 322.000 oo ka mid ah 400.000 oo euro. tobnaad
Qaamuus yar oo lagu maal galiyo suuqa saamiyada
Shaki kuma jiro in aqoon weyn u lahaanshaha shuruudaha suuqa saamiyada ay ka caawin doonto maalgashadayaasha inay aad ugu fiicnaadaan inay fuliyaan Suuqyada saamiyada waxaa jiri doona ereyo farsamo oo fara badan oo lagu dari karo qaamuus yar oo ah shuruudaha dhaqaalaha
Maalgashadayaashu ma waxay ka tegayaan Suuqa Suuqa?
Cabsida laga qabo inuu ku soo dumo suuqyada saamiyada caalamiga ah ayaa sababaya qayb weyn oo ka mid ah maal-gashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah inay yeeshaan taxaddar badan
Ku maal gasho qiimaha ugu mala-awaalka badan ee suuqa saamiyada
Xisaabaadka hoose ee damaanadahan, oo sidoo kale loo yaqaan 'chicharros', ayaa ah qodob ka hor istaagaya maalgashadayaashu inay galaan ama ka baxaan meelahooda.Sida ku xusan mabaadi'da dammaanad-qaadka la qiyaasayo waxaa lagu soo daray qiimeynno sifo gaar ah u leh saamiyada Isbaanishka.
Waa maxay cashuurta diiwaangelintu?
Canshuuraha aan tooska ahayn, midka ugu caansan waa midka loogu yeero diiwaangelinta, iyo sababaha kale maxaa yeelay wuxuu saameeyaa qof walba. Cashuurta aan tooska ahayn, mid ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa ah tan loogu yeero diiwaangelinta taasna waxay saameysaa kumanaan isticmaale ah.
Maxaa lagu qaban karaa usbuuca ugu dambeeya suuqa saamiyada?
Maalmo aad u yar ilaa dhamaadka sanad kale oo ganacsi, waxaa jira xeelado aad u yar oo aad wajihi karto si aad sanadka ugu dhammeysato si wax ku ool ah marka la eego Toddobaadkii ugu dambeeyay ee sannadka maalgashaduhu wuxuu qaadi karaa tallaabooyin qaar si loo yareeyo khasaaraha ka soo gaadhay kaydka suuqa oo uu ku soo ururay sanadahan
Endesa waxay qarka u saaran tahay kor u kac bilaash ah
Mid ka mid ah wararka ugu cusub ee na keenaya bisha Diseembar ayaa ah in shirkadda korantada ee Endesa ay ku dhowdahay inay gaarto tirada kor u kaca Mid ka mid ah wararka cusub ee na keenaya bishan Diseembar ayaa ah in shirkadda korantada ee Endesa ay qarka u saaran tahay inay istaagto tirada bilaashka ah
Layaabkii ugu dambeeyay ee sanadka: Xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha
Markii wax walba ay u muuqdeen inay tilmaamayaan inaannu geleyno isu soo baxa dhaqameed ee ciidaha Kirismaska ​​waxaan la kulannay warar sheegaya in xiriirka Ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha uu saameyn ku yeelanayo dhammaan khilaafaadka isbeddelka suuqyada saamiyada waaweyn ee adduunka.
Waa maxay dib u gurasho iyo dib u celin?
Mid ka mid ah su'aalaha ay soo bandhigeen qayb wanaagsan oo ka mid ah maalgashadayaashu waa arrimaha ku saabsan falanqaynta farsamada. Iyaga dhexdooda, dib u gurashada ayaa muhiim u ah adiga inaad ku soo noqotid si aad u fuliso hawlgallada suuqa saamiyada iyada oo aad loo ilaalinayo aadna ka faa'iideysan karto.
Eurona horeyba way uga hooseysay hal euro
Eurona Wireless Telecom (EWT), waa shirkad Isgaarsiin caalami ah oo Isbaanish ah oo bixisa adeegyo marin ballaadhan loo helo, mar kale Xaqiiqda ah in saamiyada Eurona ay hore uga hooseeyeen qaybta euro waxay kordhinaysaa cadaadiska iibka saamiyadeeda.
Aad uga taxaddar inta lagu jiro sannadkan dhibaatada cusub ama hoos u dhaca dhaqaale ayaa laga yaabaa inay soo ifbaxdo. Tani waxay caddayn ka dib isbeddelka calaamadaha kale ee dulsaarka dulsaarka Mareykanka uu siinayo maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah sidoo kale waa mid aad u muhiim ah
7 talooyin si aad ugu guuleysato suuqa saamiyada oo aad u wajahdo xisaab la'aan
Sida caadiga ah, ujeedka weyn ee maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waa in la soo saaro faa'iidooyinka ugu badan ee suurtagalka ah ee hawlgalkooda.
Dhibaatooyinka soo ifbaxaya waxay xalliyaan suuqyada
Xaaladda ay ku jiraan qaar ka mid ah waxa loogu yeero dhaqaalaha soo koraya ay marayaan, oo ay wadaan xiisadda ka taagan Turkiga iyo Argentina, waxay ku socotaa Xaaladda qaar ka mid ah waxa loogu yeero dhaqaalaha soo koraya ay marayaan waa waxa sababay burburka suuqa saamiyada.
Maalin, dhammaantood ama waxba sannadka 2019
Mid ka mid ah qiimayaasha ay tahay in aad loo feejignaado inta lagu guda jiro sanadkan aan hadda bilownay shaki la’aan maalinta ku taxan Maaha wax aan micno lahayn, waa mid ka mid ah qiimayaasha ay tahay in aad loo feejignaado inta lagu jiro sanadkan aan hadda bilownay shaki la’aan Maalintii la soo xigtay
Waa maxay qiyamka loo doortay jagooyinka gaagaaban?
Mid ka mid ah xeeladaha ay adeegsadaan maal-gashadayaasha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah si ay u muujiyaan qiimaha suuqa saamiyada ayaa ka mid ah xeeladaha ay maal-gashadayaashu u adeegsadaan inay ku muujiyaan qiimaha suuqyada saamiyada ee si weyn loo iibinayo.
Telefónica waa layaab iyo horumar ku dhowaad 5%
Mid ka mid ah warka adag ee la soo saaray toddobaadkan adag ayaa ahaa mid muhiim ah, isla mar ahaantaana, kor u kac lama filaan ah oo ku yimid saamiyada Telefónica. Mid ka mid ah warka adag ee la soo saaray toddobaadkan adag ayaa ahaa mid muhiim ah, isla mar ahaantaana, kor u kac lama filaan ah oo ku yimid saamiyada Telefónica
Heshiiska u dhexeeya England iyo Midowga Yurub ee ku saabsan codsiga Brexit iyo miisaaniyadaha guud ee ay soo bandhigi doonto dawlada Talyaanigu waxay noqon doontaa Heshiiska u dhexeeya England iyo Midowga Yurub ee ku saabsan codsiga Brexit wuxuu noqon doonaa mid go’aamiya isbedelka suuqyada saamiyada caalamiga ah.
Dow Jones waqtiga ugu sareeya
Dabcan, mid ka mid ah wararka ugu habboon sanadkan waa waxqabadka aan caadiga ahayn ee tusmada saamiyada Mareykanka, Dow Jones. Xitaa waa inaan xasuusnaano in Dow Jones ay si isdaba joog ah kor ugu kacaysay laga soo bilaabo xilligii dhibaatada dhaqaale ee ba'an la soo saaray, sanadkii 2008.
Saamiqaybsiga suuqa saamiyada? Maya, maalgelinta maalgashiga
Ku dhowaad dhammaan maal-gashadayaasha waxay ogyihiin in macaash-qeybintu ay tahay qayb ka mid ah faa'iidada shirkadda ay go'aansato inay u qaybiso saamileyda. Waa Saami Qaybsi, si kasta oo ay ahaataba, waxaa lagu bixiyaa lacag caddaan ah hawlgalkanna waa mid rasmi ah oo sannadle ah, inkasta oo ay jiraan qaabab kale
Ammaanada ka hooseeya qiimaha: Día, BBV, Acerinox
Layligan cusub ee suuq-geynta ayaa la soo baxay qiimayaal taxane ah oo leh qiime aad u soo jiidasho leh taasina waxay noqon kartaa mid soo dhaweyn leh si loo fuliyo waxa ugu wanaagsan xaaladdan ayaa ah inaad awoodi doontid inaad ku iibsato saamiyada Maalinta qiimo aad u tartan badan hadda on
Suuqa saamiyada Mareykanka ma wuxuu filanayaa hoos u dhac?
Kadib bilooyin aad iyo aad u badan oo hakad galay, suuqa saamiyada Mareykanka wuxuu bixinayaa calaamadaha ugu horeeya ee muuqaalkaan awooday.
Waa maxay badeecado la soo saaray?
Markaad ka hadlayso qaybta maalgashiga, mid ka mid ah wax soo saarka ugu caansan ee jira waa waxa loogu yeero alaab-tilmaameedka. Iyagu waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican Mid ka mid ah faa'iidooyinka ay leeyihiin waxa loogu yeero alaab-tilmaameedka ayaa ah inay furayaan moodallo badan oo maalgashi.
Endesa iyo Iberdrola xaalad wax iibsi ah
Mid ka mid ah qeybihii ugu adkaa ee toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa ah, layaabka ugu weyn ee maalgashadayaal badan, koronto iyo Mid ka mid ah kiisaska ugu habboon ee isbeddelkan kor u kacay ee mid ka mid ah qaybaha ugu habboon ee sinnaanta qaran waa kan Endesa
6 istaraatiijiyad oo sanadka si fiican loogu dhammeeyo
Weli waxaa jira rajo qaar ka mid ah in si wanaagsan loo dhammeeyo xiriirka aan la leenahay suuqyada maaliyadeed inta lagu gudajiray sannadkan adag ee loogu talagalay suuqa saamiyada Weli waxaa jira rajo qaar ka mid ah in si wanaagsan loo dhammeeyo xiriirka aan la leenahay suuqyada maaliyadeed haddii istiraatiijiyad maalgashi gaar ah la dabaqo.
Isbedelada suuqa saamiyada iyo sida looga ganacsado
Mid ka mid ah furayaasha sameynta keydka guuleysta ayaa faa'iido u leh ogaanshaha sida loo fasiro isbeddellada ugana shaqeeyo si sax ah. Ma awoodi kartid Mid ka mid ah furayaasha ka dhigaya inaad guul ka gaarto kaydinta faa'iido been abuur ah inaad ogaato sida loo fasiro isbeddelka oo aad ugu shaqeyso si sax ah
Waa maxay SWAP?
SWAP waa soo gaabinta qandaraaska oo wali ay yaryihiin wakiilo gaar ah adduunka lacagta. Gaar ahaan, waxaa loola jeedaa qandaraaska SWAP, waa heshiis maaliyadeed oo u dhexeeya laba dhinac oo ku heshiiya in la isweydaarsado socodka lacagaha mustaqbalka iyadoo lagu saleynayo qaaciido horay loo dejiyey
Oktoobar bisha madow ee suuqa saamiyada Isbaanishka
Oktoobar ayaa mar kale u ahayd bil madow suuqyada sinnaanta ee Spain. Ka dib markii la gaadhay uguyaraantii sanadlaha illaa Oktoobar mar kale, Oktoobar waxay mar kale u ahayd bil madow suuqyada sinnaanta ee Isbaanishka, ka dib markay gaadheen ugu yaraan sannadlaha ah
5 fure oo suuqa saamigu ku xirnaan doono 2019
Kordhinta suurtagalka ah ee suuqyada saamiyada caalamiga ah waxay aad ugu dhowaan doontaa laba lambar haddii heerarka kobaca ee ay tilmaameen suuqyadu la ixtiraamo Sannadkan waxaa jiri doona fureyaal taxane ah oo lagu go'aaminayo wadada ay suuqyada saamiyada u marayaan sannad gudihiis wuxuu noqonayaa mid aad u adag
Brazil waxay kufiican tahay suuqyada saamiyada caalamiga
Dhab ahaantii xaqiiqdii waxaa jiray maalgashadeyaal badan oo u maleynayay in Oktoobar madow ay ku dhammaan karto xitaa ka sii xun suuqyada dhaqaalaha. Bovespa waa tusmada guud ee sinnaanta ee Brazil waana mid ka mid ah astaamaha u gaarka ah isticmaaleyaasha Latino
Iibin ama ku sug suuqa saamiyada?
Hawlaha suuqa saamiyada, kaliya lagama maarmaan ma aha in lagu xisaabtamo waxtarka hawlgallada ay keeni karaan. Haddii kale, taa lidkeed, waa mid aad muhiim u ah Waqtigan xaadirka ah ee faa'iidooyinka raasumaalku bilaabayaan inay ka muuqdaan maalgashiyada la sameeyay, waa wax iska caadi ah inaad isweydiiso haddii ay tahay xaaladda saxda ah ee iibinta
Waa maxay faa'iidada dhabta ah ee faa'iidooyinka raasumaalku?
Hawlaha suuqa saamiyada, kaliya lagama maarmaan ma aha in lagu xisaabtamo waxtarka hawlgallada ay keeni karaan. Haddii kale, taa lidkeeda, waxaa lagama maarmaan ah in la tiriyo faa'iidooyinka raasamaalka ee suuqa saamiyada waa farqiga togan ee u dhexeeya qiimaha iibka iyo iibka saamiyada waxayna kuxirantahay kharashyada howlaha
Maxaa la sameeyaa marka suuqa saamigu hoos u dhaco?
Dabcan, sanadkan maahan mid aad u wanaagsan suuqyada saamiyada, aad ayuu uga yaryahay toddobaadkan oo dhammaad ku dhow. Hoos u dhaca ku yimid suuqyada Dabcan sanadkan maahan mid aad ugu wanaagsan suuqyada saamiyada waxbadanna wuu ka yaraa toddobaadkan iyadoo hoos u dhac cusub uu ku yimid suuqyada.
Ma ka ogtahay wax ku saabsan Stoxx Europe Football?
Dabcan, in ka badan hal maal-galiye ayaa si gaar ah u garaaci doona magaca liis-gareynta kaydka oo ah mid gaar ah oo la yaab leh maaddaama Stoxx Europe Football ay tahay tixraac kale oo lagu maalgeliyo lacagtaada iyada oo loo marayo soo-jeedin ka duwan si suuqa uu faa'iido u helo.
Dhammaan suuqyada saamiyada ayaa burbura tan iyo 1929
Shilalka suuqyada saamiyada ayaa ah hoos u dhac ku yimaada suuqyada sinnaanta muddo aan dheereyn oo waqti dheer ah waxaana lagu gartaa shilalka suuqa saamiyada waa hoos u dhac ku dhaca suuqyada sinnaanta inta lagu jiro waqti aan xad dhaaf ahayn
Maxay yihiin noocyada dhaqaalaha?
Dabcan, kala-soocidda maaliyadeed waa mid ka mid ah wax soo saarka ugu casrisan ee maalgashadayaashu ay ku biiri karaan xilligan. Waxtar la'aan
La socodka maalgashiga: halkee?
Tan iyo xagaagan, maalgashadayaashu waxay ku jiraan xaalad ay ka kala xulan karaan kanaallo badan oo macluumaad ah si ay u ogaadaan xaaladda hantidooda Dhammaan wargeysyada saxaafadda qaranka waxay bixiyaan macluumaad ku saabsan kormeerka qiimaha sinnaanta ama noocyada kale ee maalgashi.
Dakhliga shirkadda 'Reinvest'
Saami-qeybsiga suuqa saamiyada wuxuu abuuraa celcelis faa'iido ah oo ku dhow 5% kiis walbana macnaheedu waa sameynta dakhli go'an oo ku dhex jira doorsoomaha. Marka loo qaybiyo suuqyada saamiyada waxay soo saaraan celcelis faa'iido ah oo kudhowaad 5% kiis walbana macnaheedu waa sameynta dakhli go'an oo kujira doorsoomaha
DIA waxay hoos u dhacday in ka badan 40% suuqa saamiyada
Mid ka mid ah qiimayaasha ugu habboon ee sinnaanta qaran sida DIA ayaa ku burburay suuqa saamiyada waxayna hoos ugu dhacday in ka badan 30%. Boqolkiiba Mid ka mid ah qiimayaasha ugu habboon ee sinnaanta qaranka sida DIA ayaa ku burburay suuqa saamiyada waxayna hoos ugu dhacday in ka badan 30%
Miisaaniyaduhu waxay niyad jabinayaan suuqa saamiyada ee Isbaanishka
Heshiiskii lagu gaadhay diyaarinta Miisaaniyadaha Guud ee Gobolka ayaa si aad u xun ay u heleen suuqyada maaliyadeed Heshiiskii lagu gaadhay diyaarinta Miisaaniyadaha Gobolka ayaa si aad u xun ay u heleen suuqyada dhaqaalaha
6 fure oo suuqa saamiyadu ku xirnaan doonaan dhamaadka sanadka
Inti lagu gudajiray maalmaha tusmada xulashada suuqa saamiyada Isbaanishka xoogaa hoos ayuu udhacay, nasiib darose maalgashadayaal badan iyo kuwa badan oo leh Waxaa jira furayaal taxane ah oo aad adigu ku ogaan karto sida looga dhaqmo suuqyada maaliyadeed bilihii ugu dambeeyay ee sanadka iyo kan yihiin kuwo aad u adag
CEPSA waxay soo bandhigi doontaa dadweynaha
Mid ka mid ah wararka suuqa saamiyada ee dayrta na keeni doona ayaa ah soo galitaanka shirkadda saliidda ee CEPSA suuqyada sinnaanta qaranka. Waxay ku saabsan tahay Waxyaabihii hore ee ay CEPSA yeelatay aysan ahayn kuwo rajo badan leh waxayna kuxirantahay shirkadaha fuliyay istiraatiijiyadan ganacsi
Maxay yihiin badeecadaha u oggolaanaya kala-duwanaanta maalgashiga?
Waa istaraatiijiyad u oggolaanaysa dadka isticmaala marin noocyo badan oo maalgashi ah, laakiin ka imanaya hal shey oo maaliyadeed. Iyada oo leh Waxaa jira alaabooyin taxane ah oo ilaaliya xoogaa astaamo gaar ah, taas oo ah, waxay u oggolaanayaan kala duwanaanshaha maalgashiga.
Maxay Brazil muhiim ugu tahay suuqyada?
Maalmahan mid ka mid ah waxyaabaha diirada lagu saaray suuqyada maaliyadeed ayaa ah Brazil oo ay ugu wacan tahay doorashooyinka madaxtinimada ee dhacaya Maalmahan mid ka mid ah diiradda isha lagu hayo suuqyada maaliyadeed ayaa ah Brazil doorashada madaxtooyada awgeed.
Shan tilmaame oo loogu talagalay ka ganacsiga suuqa saamiyada
Tilmaamayaashaani waa kuwo asal ahaan lagu gartaa maxaa yeelay iyagu weligood damaanad kama qaadaan guusha dhammaystirka ee hawlgallada, laakiin ugu yaraan waxay dammaanad ka qaadaan go’aamada.
Canshuuraha muddada ee ku xiran suuqa saamiyada
Waa la wada ogyahay in dhigaalka erayga bangiga uu yahay badeecad maaliyadeed oo uu macaamilku ugu dhiibo qadar lacag ah hay'ad waxa Maalgashadayaasha qaar aysan ogeyn inay tahay in lacagaha keydka ah ay ku xirnaan karaan suuqa saamiyada si loo hagaajiyo dhinacyada dhexdhexaadinta
Kaydka tiknoolajiyada ayaa cabsi galiya maalgashadayaasha
Mid ka mid ah qaybaha suuqyada sinnaanta ee gelin kara maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah dhibaatada ugu weyn ayaa ah tiknoolajiyadda. Mid ka mid ah qeybaha suuqyada sinnaanta ee gelinkara maalgashadayaasha dhibaato dheeri ah waa keydka tikniyoolajiyadda.
Sidee loola dhaqmaa maal gashiga dayrta?
Shaki kuma jiro in maalgashiyadu si weyn isu beddeli doonaan xilligan dayrta. Mid ka mid ah sababaha loo sharxayo isbeddelkan waxaa sabab u ah tan iyo markii Shaki kuma jiro in maal-gashigyadu ay si weyn isu beddeli doonaan xilligan dayrta waana inaan aad uga warqabnaa dhaqdhaqaaqyadan
Miyey ku habboon tahay aniga inaan qandaraas ku iibsado sicirka suuqa saamiyada?
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee aan la garanaynin ee ku saabsan suuqa saamiyada ee maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ahi shaki kuma jiro khidmadda fidsan ee ganacsiga suuqa saamiyada. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee aan la garanaynin ee ku saabsan suuqa saamiyada ee maalgashadayaasha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ahi shaki kuma jiro khidmadda fidsan ee ganacsiga suuqa saamiyada.
Sebtember ayaa ka tagta Telefónica heerarka taariikhiga ah
Bishan ayaa taariikhda gali doonta kadib markii ay u jiiday saamiyadii ugu yaraa sanadihii la soo dhaafay. Meeshii qiimihiisu ahaa Bishan waxay taariikhda u gali doontaa inay jiiday saamiyada Telefónica si ay uga quusato maalgashadayaasheeda
Maxay yihiin boorsooyinka layaab ku noqon kara dhamaadka sanadka?
Waxaa jira hal rubuc oo kaliya illaa sanadka maaliyadeed ee 2018 la dejinayo taasna waxay xoogaa niyad jab ku noqotay qayb weyn oo ka mid ah maalgashadayaasha Iskusoo wada duuboo, majiraan xulasho aan ka aheyn in la ogaado oo ah meelaha juquraafi ahaaneed ee bixin doona soo celinta ugu sareysa dhamaadka sanadka,
Suuqa saamiyada: waa maxay BPA?
Haddii aad wakhti ku qaadato suuqa saamiyada, waa inaad taqaan mid ka mid ah soo gaabinta oo kaa caawinaysa inta badan maalgashiga, sida BPA. EPS waa tusmada xisaabisa qaybta faa'iidada saafiga ah ee shirkadda loo qaybiyay mid kasta oo ka mid ah saamiyada ka kooban caasimadda
Shuruudaha lagu sameynayo kala-wareejinta lacagaha maal-gashiga
Mid ka mid ah howlaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay danaha maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ayaa lagu ogaadaa iyada oo loo marayo wareejinta lacagaha Mid ka mid ah howlaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay danaha maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ayaa lagu ogaadaa wareejinta lacagaha.
10 furayaal maalgashi dabacsan
Mid ka mid ah xeeladaha ugu wanaagsan ee lagu fulin karo nooc kasta oo maalgashi ayaa ah in lagu soo rogo shuruudaha dabacsanaanta. Tani waa mid ka mid ah xeeladaha ugu wanaagsan ee lagu fulin karo nooc kasta oo maalgashi ah oo lagu soo rogo shuruudaha dabacsanaanta
Hantida xasilloonida ee aaminka ah si ay ula kulmaan suuqa saamiyada ee dhibaatada
Waxa ugu xun ee dhici kara maahan in saamiga saamiyada Isbaanishku uu aad ugu dhow yahay heerarka 9.000 dhibcood. Laakiin waa la jiheyn karaa iyada oo ka sii hooseysa isbeddelkeeda.Si kaydinta looga dhigo mid faa'iido leh, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la doorto hanti maaliyadeed oo gaar ah oo wax ka qaban doonta inta kale.
Saamiyayaashu sifiican ugama aysan helin soo noqoshada ciidaha dhanka maalgashadeyaasha ee dabaqyada ganacsiga. Haddii kale maahan wax walba Dhacdooyinku waxay u horseedeen sinnaanta qaran inay gaaraan heerar aad u hooseeya isla markaana ay ka ganacsadaan dib u soo kabashada ugu yar ee sanadlaha ah
Xaqiiqda ah inaad wax qaban karto macnaheedu maahan inaad hadda sameyso. Waana wax aad u yar markii aad ku khamaareyso lacagtaada, sida ku dhacda xaqiiqda ah inaad wax qaban karto macnaheedu maahan inaad hadda sameyso. Iyo wax aad u yar markii aad ku khamaaraysid lacagtaada, sida ku dhacda maalgashiga
Iberdrola: shirkadda korontada doorbiday falanqeeyayaasha
Qeybta korantada waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan suuqyada Isbaanishka gudaheeda shaki kuma jiro in Iberdrola ay tahay shirkada laga doorbido Qeybta korantada waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan suuqyada Isbaanishka gudaheeda dhexdeeda shaki kuma jiro in Iberdrola la doorbiday shirkadda
Carbures waxay ku fidaysaa dhinaca kale ee Atlantic
Carbures, oo ah mid ka mid ah qiimayaasha ugu macquulsan ee sinnaanta qaranka, ayaa maalmahan sameynaya cinwaano cinwaan ah sababo la xiriira warar jiheyn cusub siin kara Ma iloobi kartid in qiimaha sida Carbures ay yihiin kuwo aad u qaldan marka laga eego dhammaan aragtida iyo istaraatiijiyadda aad isticmaali doontid
Waxaa suuqa ku yaal badeecooyin kala duwan oo gacan ka geysta horumarinta shaqadan qaarkoodna runtii ku wanaagsan yihiin guusha.
Soo noqoshada ciidaha ayaa leh waxyaabo badan oo layaab leh oo loogu talagalay danaha maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah taasna waxay ku kicin kartaa inay wax ka beddelaan Ku soo noqoshada ciidaha ayaa leh waxyaabo badan oo la yaab leh oo loogu talagalay danaha maalgashadayaasha yaryar oo leh kala duwanaansho caan ah qiyamka
Sidee looga faa'iideysan karaa kobaca dalxiiska ee maalgashiga?
Qeybta dalxiiska Isbaanishka waa qeybta seddexaad ee ugu awooda badan adduunka, kaliya waxaa ka dambeeya Mareykanka iyo Faransiiska. Tani waa xaqiiqo aad uga faa'iideysan karto Dalxiiska waa warshaddii ugu horreysay ee dhaqaalaha Isbaanishka, laakiin isla waqtigaasna waax aad ugu khasaartay suuqa saamiyada shirkadaha yar ee ka wakiil ah suuqa joogtada ah ee waddankeenna.
Shan fikradood oo dib loogu bilaabo maalgashiga fasaxa kadib
% Dabcan, ka soo noqoshada fasaxa ma sahlanaan doonto sidaa darteed waxaad fikradaha maalgashiga xoogaa u adeegsan kartaa
Qiyamka qaranka ee ay aadka u saameysay dhibaatada ka dhacday Turkiga
Xagaagan wuxuu na siiyay lama filaan aan fiicnayn oo maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe aysan haysan. Tani waa dhibaatada dhaqaale ee kajirta waxa ka dhacaya turkiga waa qodob aysan maalgashadayaashu haysan taasi runtiina waxay ku keenaysaa inay lumiyaan lacag aad u badan.
Goorma ayey tahay inaad lacagta geliso suuqa saamiyada?
Iibsashada iyo iibinta saamiyadu waa mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee faa'iido looga heli karo ama loo maalgashan karo keyd, inkasta oo aysan ahayn taxaddar la'aan
Waa maxay IPO?
In kasta oo IPOs saameyn ku yeeshaan shirkadaha aan ku qorneyn suuqyada sinnaanta, waxa aan qaban doonno waa kuwa ku qoran suuqa saamiyada
Qaamuuska Bacda ee Bilowga
Maalgelinta lacagta suuqa saamiyada waxay u baahan tahay aqoon aasaasi ah si loo wado hawlgallada iyadoo la damaanad qaadayo guusha weyn. Ma dhici karto in aan ogahay Mid ka mid ah waxyaabaha kaa sooci doona adiga kuwa kale ee yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waa in la ogaado qaamuus ballaaran oo ku saabsan shuruudaha saamiyada
Faa'iidada Endesa waxay aad ugu egtahay tan debaajiga
Endesa waa mid ka mid ah dammaanadaha ugu firfircoon suuqyada sinnaanta iyo illaa iyo in ay jiraan kumanaan iyo kumanaan saamileyaal ah oo beddelaya gacmaha
Ka ganacsiga suuqyada saamiyada ee internetka, laakiin leh dammaanad
Internetku wuxuu noqday aalad awood badan oo maalgashi lagu sameeyo. Hawlgalkeedu waa mid kacsan oo wakhti kasta oo maalintii ah, xitaa internetka, waxay noqotay aalad awood u leh sameynta maalgashi, halkaasoo howlaheeda ay ka dhaqso badan yihiin iyo waqti kasta oo maalintii ah.
Furayaasha si ay u bilaabaan maalgashiga suuqa saamiyada
Dabcan, maalgashadayaasha khibrada badan u leh suuqyada maaliyadeed waxay la kulmi doonaan dhibaatooyin ka yar sidii ay si toos ah ugu gudbin lahaayeen maalgashigooda Si loo bilaabo maalgashiga suuqa saamiyada, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo taxane fureyaal ah oo gacan ka geysanaya guuleysiga howlaha suuqyada maaliyadeed.
Suuqyada soo ifbaxaya: kuwaas oo ah kuwa ugu fiican ee la maalgashan karo
Haddii aad raadineyso beddelka sinnaanta tani shaki la’aan waa midka ay sameysay suuqyada soo kordhaya, gaar ahaan isweydaarsiyada qaarkood
10 talooyin si loo badbaadiyo lacag ku saabsan ganacsiga saamiyada
Dabcan, ujeedka ugu weyn ee kaliya ee maalgashadayaasha yar yar iyo kuwa dhexe ay leeyihiin waa inay lacag ka helaan howlaha ay ka wadaan suuqyada dakhliga, dabcan, ujeedada ugu weyn iyo kaliya ee ay leeyihiin maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe waa inay lacag ka helaan howlahooda.
Maaddaama faafitaanka qiimaha halista uu sareeyo, waxay saameyn ku yeelan doontaa hoos u dhaca dakhliga go'an maaddaama suuqyada suuqyadu ay u nugul yihiin sameynta hoos u dhac fiiqan
Lacagta halista waa mid ka mid ah xuduudaha ugu muhiimsan ee lagu go'aaminayo isbeddelka suuqyada saamiyada. Maaha wax aan micno lahayn, maalgashadayaashu waxay eegaan dhammaantood Khatarta halista ayaa ah mid ka mid ah xuduudaha ugu muhiimsan ee lagu go'aaminayo isbeddelka suuqyada saamiyada ee ka sarreeya
Canshuurta Tobin ama ITF waa nooc ka mid ah canshuuraha laga qaado macaamil maaliyadeed oo uu soo jeediyay tobanaan sano ka hor dhaqaaleyahan Mareykan ah oo hormood ah
Dakhliga raasumaalka ee suuqa saamiyada, maxaa lagu sameeyaa iyaga?
Marba marka ka sii weyn ee faa'iidada raasumaalku, waxay u roon tahay danahaaga shakhsi ahaaneed, wax kasta oo erey ah oo loogu talagalay maalgelintaada.
Maxay yihiin xarumaha awoodda dhaqaale?
Haddii aad ku maalgelinayso keydkaaga suuqyada sinnaanta, ma lihid xulasho aan ka ahayn inaad ka warqabto xarumaha kuwaas oo ah kuwa tilmaamaya awoodda dhaqaale ee adduunka.
Maxay yihiin badeecadaha maaliyadeed ee aad ku maalgashan karto lacagaha?
Qeyb wanaagsan oo ka mid ah maalgashiga waxaa lagu sameeyaa euro maxaa yeelay waa lacagta ugu badan ee keydka Isbaanishka. Si kastaba ha noqotee, kuma shaqeyn kartid oo keliya Maalgelinta lacagaha kale ee caalamiga ah waxay ku siinaysaa suurtagalnimada in maalgashigaagu uu horumarin karo marka la eego miraha la soo saaray
Buugaagta ugu sarreysa sarrifka
Xulashada buugaagta saamiyada ee ku siinaya adiga fikradaha ugu fiican si aad uga dhigto hawlgallada suuqyada saamiyada wixii hadda ka dambeeya aad bay muhiim u tahay.
Farqiga u dhexeeya falanqaynta farsamada iyo aasaasiga ah
Qof kasta oo maalgashi ku samaynaya lacagtiisa suuqyada sinnaanta waa inuu tixgeliyaa ugu yaraan qaar ka mid ah istiraatiijiyadan falanqaynta Farsamada iyo aasaasiga ah waxaa lagu dhisay laba nidaam oo gebi ahaanba kala duwan laakiin labada waa la dhammaystiri karaa.
Iibi hadda si aad dib ugu bilawdo maalgashiga fasaxa kadib
Dabcan, haddii aad tahay maal-galiye khibrad u leh suuqyada maaliyadeed, waxaad maqli doontaa inay caqli gal tahay inaad wax iibiso ka hor intaadan fasax gaarin.
Roob ku qeybi bilowga xagaaga
Xagaagu mar kale ayuu halkan joogaa waana hubaal bilaha Juun iyo Julaay halkaasoo qaybinta saami-qaybsiga ay gaadhay heerkii ugu sarreeyay sanadka.
Waa maxay PER?
Waa inaad ogaataa in PER uu yahay mid ka mid ah astaamaha ugu isticmaalka badan si loo ogaado haddii suuqyada maaliyaddu qaali yihiin ama raqiis yihiin
Maxay yihiin tabarucaadka lacagaha isku dhafan?
Waxa loogu yeero lacagaha isku dhafan waxay leeyihiin halabuur aad u kala duwan tan iyo markii ay ka soo bilaabeen hanti maaliyadeed oo kala duwan iyo dabeecado kala duwan
Dilaaliinta khadka tooska ah si ay ugu shaqeeyaan suuqa saamiyada
Dabcan, dillaaliinta khadka tooska ah waa mid ka mid ah beddelaadaha aad xilligan haysato si aad ugu gudbiso hawlgallada suuqa saamiyada
Korodhka raasamaalka: waa maxay, goorma ayaa la qabtay, iwm.
Dabcan, haddii aad tahay maalgashade yar iyo mid dhexdhexaad ah, waxaad ogaan doontaa in kororka raasumaalku yahay geeddi-socod si dhow ula xiriira suuqyada sinnaanta
Tusmooyinka ugu badan ee aan la aqoon ee suuqa saamiyada Isbaanishka
Waxaad ka heli doontaa indices indha sarcaad oo noocyo kala duwan leh, qaar si fiican loo yaqaan laakiin mid kale oo hubaal aadan waligaa maqli doonin.
Waa maxay dalab lala wareegayo?
Maaddaama qayb wanaagsan oo ka mid ah maal-gashadayaashu ay si fiican u ogyihiin, dalab la wareegidda waa soo gaabinta waxa qandaraaska la wareegidu runti tahay
Maxaad ka qaban kartaa khasaaraha suuqa saamiyada?
Maalgashadayaasha yar yar iyo kuwa dhexe waxay kujiraan boos ay ku adeegsadaan xeelado gaar ah si ay u joojiyaan yareynta raasumaalka suuqa illaa daqiiqadaas, taasi waa, khasaaro raasumaal
Sidee looga badbaadi karaa isbedelka suuqa?
Sannadkan iyo dhammaan khilaafaadka, isbeddelku wuxuu ku soo laabtay suuqyada maaliyadeed ka badan seddex sano ka dib iyada oo aan joogin hawlgallada.
Waa maxay ka faa'iideysiga suuqa saamiyada?
Qeybta maaliyadeed waxaa jira dhowr siyaabood oo lacag lagu heli karo, suuqa saamiyada oo ka mid ah qeybaha aan la aqoon, waxaan ku leenahay suuq wax ku ool ah hab wax ku ool ah
Lacagta ma seexato: maalgashiga dhamaadka usbuuca
Sannadihii ugu dambeeyay, ikhtiyaarka ah ka ganacsiga qalabka maaliyadeed inta lagu jiro dhamaadka usbuuca ayaa furmay, xitaa suuqyada noocan oo kale ah.
Xagee lagu maalgashaa si loo soo saaro faa'iidada ugu fiican
Suuqyada maaliyadeed waxay suurtogal ka dhigayaan in lagu hagaajiyo faa'iidada iyada oo loo marayo qaab maalgashi oo kale laakiin aad u faa'iido badan
Ku maal gasho suuqa saamiyada, laakiin laga bilaabo keydinta muddada
Kaydadkaani waxay ka dhigan yihiin istiraatiijiyad asal ah si loo yareeyo khataraha isla markaana, si kadis ah, loo helo dib u soo celinta keydkaaga oo ka sarreysa tan alaabada bangiyada soo jireenka ah.
Istaraatijiyadaha maalgashiga: sida loo dabakho?
Markaad adeegsato xeeladaha maalgashiga qaarkood, had iyo jeer way kuu fududaan doontaa inaad kaydinta ka dhigto mid faa'iido u leh habka ugu saxsan ee suurtogalka ah.
Dhammaan tusmooyinka suuqa saamiyada Isbaanishka
Dhamaan noocyada saamiyada Isbaanishka, kuwa tixraac ahaan u leh shirkadaha xisaabaadka yaryar iyo kuwa dhexe ayaa taagan.
Maxay yihiin farqiga u dhexeeya dib u soo laabashada iyo dib u noqoshada isbeddelka?
Dabcan, suuqa saamiyada, mid ka mid ah khaladaadka ugu waaweyn ee lagu sameyn karo in aan la kala soocin waxa dhab ahaan dib u soo noqoshada iyo waxa isbeddelka isbeddelka ku yimid
Bangiyada ayaa ah qaybta ugu daran ee saamaysay suuqa saamiyada
Xasilooni darrada ay suuqyada Talyaaniga iyo Isbaanishka maalmahan la kulmayaan ayaa ciqaab adag ku haysa dammaanadaha ay leeyihiin bangiyada
Xasilooni darrada siyaasadeed ee Isbaanishka ayaa mugdi gelineysa maalgashi xagaagan
Mid ka mid ah xaaladaha ugu xun ee suuqyada maaliyadeed ayaa lagu rakibay Spain markii ugu yaraa laga fikiray waana xasillooni darro siyaasadeed
Sidee looga gaashaaman karaa xasilloonida suuqyada maaliyadeed?
Spain, Talyaaniga, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Kuuriya waa qaar ka mid ah qodobada juqraafiyeed ee xasillooni darrada ku daraya suuqyada maaliyadeed
Alaabta ceeriin ee ku jirta cuntada: waa beddelka maalgashiga
Waxyaabaha ceyriinka ah waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ammaanta wajiga xaaladaha ugu xun ee suuqyada maaliyadeed
Ku beddel istaraatiijiyada maalgashiga xaalada hadda taagan
Haddii ay jirto nabadgelyo leh boos iibsi istiraatiijiyadda iibsiga ee hadda, waa cid kale oo aan ahayn shirkadda shidaalka qaranka ee Repsol.
Saameynta maalgashi ee dowladda cusub ee Talyaaniga
Astaamaha xun ee suuqyada maaliyadeed ayaa lagu rakibay Talyaaniga, taasoo ka dhalatay dowladda cusub ee la dhisi doono inta u dhexeysa 5-Xiddig Dhaqdhaqaaqa iyo La Liga.
ACS iyo Siemens, waa labada kayd ee ugu xoog badan Ibex 35
Si kastaba xaalku ha ahaadee, Siemens Gamesa iyo ACS labaduba waxay hoggaanka la wareegeen qeybtii hore ee simistarkan adag ee suuqa saamiyada.
Sidee xoojinta dollarku saameyn ugu yeelaneysaa dhaqaalahaaga shaqsiyadeed?
Haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato dhaqdhaqaaqa kor u kaca ee doolarka Mareykanka ee ka dhanka ah lacagta euro, xulashada ugu qanacsan ayaa ah inaad doorato howlaha ganacsiga
Isweydaarsiga Suuqa Ruushka, Layaab Sannadkan Suuragal ah
Haddii uu jiro suuq caalami ah oo xagga sinnaanta ah oo sannadkan faa iiddo yeelan kara, shaki la’aan waa tan Ruushka oo leh xulashooyin lagu soo saari karo faa iidooyin badan
Sagootinta heshiiska nukliyeerka ee Iiraan sidee ayey saameyn ugu yeelan doontaa suuqa saamiyada?
Suuqyada saamiyada Yurub waxay isku dayayaan inay la midoobaan go'aanka Mareykanka ee ka tanaasulay heshiiskii Nukliyeerka ee Iiraan taasina ay khalkhal gelin karto suuqyada
Maxaad ka taqaanaa Fibonacci?
Mid ka mid ah ujeeddooyinka ugu habboon ee fibonaccio waa in la dhiso aagag taageero iyo iska caabin ah oo laga fuliyo meheradaha suuqa saamiyada.
Sidee ayuu hoos ugu dhaca euro-du saameyn ugu yeeshaa suuqa saamiyada?
Sannadkan, euro wuxuu noqon karaa hanti maaliyadeed oo aad u habboon si loo go'aamiyo isbeddelka sinnaanta bilaha soo socda.
Waa maxay BPA maxaase muhiimad u leh?
EPS ama dakhliga ku soo gala qayb kasta waa mid ka mid ah xuduudaha ay tahay in lagu xisaabtamo si loo galo suuqyada sinnaanta
Waa maxay maalgashiga isbeddelka?
Isbeddelku waa qodob ka mid ah suuqyada maaliyadeed ee lacag samayn kara haddii xaaladda la rabo ay ku dhacdo dhaqaalaha
Maxay yihiin waxyaabaha ka soo jeeda dhaqaalaha?
Xaqiiqdii waxaad maqashay in kabadan hal munaasabad oo ah waxa ka dhasha dhaqaale. Iyada oo ujeedada koowaad ee maalgashiga alaabtan si kor loogu qaado faa'iidada hantidaada
Iberdrola waxay bilaabaysaa dalab ay kula wareegeyso shirkad reer Brazil ah
Iberdrola waxay go'aansatay inay soo bandhigto dalab lagula wareegayo qaybiyaha reer Brazil Eletropaulo iyadoo ujeedadu tahay inay iibsadaan inta udhaxeysa 51% iyo 100% saamiga.
Weerarada xulafada ee Siiriya saamaynta ku leh suuqa saamiyada?
Weerarrada isbahaysiga ee Suuriya waxay dhaawici karaan isbeddelka suuqa saamiyada haddii ay sii socdaan waqti ka dib, wax aan dhicin
Sidee loo ogaadaa digirta?
Chicharros waxay ku taxan yihiin damaanadaha u nugul hawlgallada male-awaalka ah waxayna lacag ku helaan waqti gaaban
Arcelor ama Acerinox? Waa maxay doorashada ugu fiican
Arcelor iyo Acerinox waxaa ku xiga tiro wanaagsan oo maal-gashadeyaal yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah ah kuwaas oo tijaabiya sida qiimaha saamiyadoodu u kobcayaan inta lagu jiro sannadkan